Topnepalnews.com | उपत्यकामा एमालेको वर्चश्व,माओवादी केन्द्रको स्थिति दयनीय, कुन दलको कति सिट ?
उपत्यकामा एमालेको वर्चश्व,माओवादी केन्द्रको स्थिति दयनीय, कुन दलको कति सिट ?
Posted on: May 25, 2017 | views: 135
काठमाडौं, जेठ ११ । काठमाडौं उपत्यकाका २१ मध्ये १९ स्थानीय तहको मतपरिणाम आइसकेको छ । घोषणा भएका मतपरिणामअनुसार एमालेले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह जितेर अग्रता कायम गरेको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा एमालेले १० स्थानीय तहमा प्रमुख पद जितेको छ । प्रतिशतका आधारमा यो संख्या ५२.६ हो । उसले ११ स्थानमा उपप्रमुख जितेको छ, जुन घोषणा भएका तहमध्ये ५७.८९ प्रतिशतले अघि हो । अर्थात् एमालेले उपत्यकाभित्र प्रमुखमा ५२.६ र उपप्रमुखमा ५७.८९ प्रतिशत वर्चश्व कायम गर्न सफल भएको छ ।
एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलका अनुसार उपत्यकामा अहिले प्राप्त मत ०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनको भन्दा राम्रो हो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको पक्षमा लिएको दृढताका कारण एमाले जबर्जस्त अघि आएको उनको तर्क छ । ‘राष्ट्रियताको पक्षमा एमालेले दृढताका साथ आफूलाई उभ्यायो । विकास निर्माणमा एमालेले सारेको एजेन्डा स्पष्ट थिए, यसलाई उपत्यकावासीले मन पराए । निर्वाचनको परिणाम यसैको प्रतिबिम्ब हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसले घोषणा भएका तहमध्ये ६ स्थानमा मात्रै प्रमुख जितेको छ । उपप्रमुख भने पाँच स्थानमा जितेको छ । अर्थात् कांग्रेसले घोषणा भएकामध्ये ३३.३ प्रतिशत तहमा प्रमुख जितेको छ । उपप्रमुख भने २७.७प्रतिशत मात्रै जित्न सफल भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा वर्चश्व कायम गर्ने मामिलामा सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र निकै पछि परेको छ । माओवादी केन्द्रले एक स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख र उपप्रमुख जित्न सकेको छ । अर्थात् माओवादीले उपत्यकामा ५.५ प्रतिशत स्थानमा मात्रै आफ्नो वर्चश्व कायम गर्न सकेको छ । माओवादी केन्द्रका अनुसार चुनावप्रतिको अन्योलता र एकांकी नेतृत्वका कारण परिणाम नाकारात्मक आएको नेताहरूको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य मणि थापाले उपयुक्त उम्मेदवार चयन गर्न नसक्नु र सरकारको काम जनतामा लग्न नसकिएकाले काठमाडौं उपत्यकामा पार्टीले चुनाव हार्न पुगेको बताए । ‘पहिलो त चुनाव हुने कि नहुने भन्ने अन्योलबीच हामी निर्वाचनमा गयौँ । यसको असर चुनावमा पर्यो । कार्यकर्ताबीच नेतत्व पुग्नै सकिएन । सरकारको उपलब्धि जनतासम्म लैजान सकिएन । नेतृत्व एकांकी बन्यो । यसको असर चुनाव पर्यो,’ उनले भने ।
भक्तपुरमा नेमकिपाको वर्चश्व कायमै
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उपत्यकाको भक्तपुरमा वर्चश्व कायम राख्न सफल भएको छ । भक्तपुरबाहेकका जिल्लामा नेमकिपाले खासै जित्न सकेन । उसले उपत्यकामा एक स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख जित्न सकेको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालको संयुक्त प्यानल, लोकतान्त्रिक फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चाको काठमाडौं उपत्यकामा स्थिति निकै नाजुक देखिएको छ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।